Dib -u -eegista Webuyanycar 2022: Ma Xalaalbaa mise Waa Fadeexad Iibin Baabuur
Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Webuyanycar 2022: Ma Xalaalbaa mise Waa Fadeexad Iibin Baabuur
Weligaa ma u baahnayd inaad wax qabato oo ma aad sugi kari lahayd oo keliya inaad samir samaysato? Haddii tani ay ahayd kiiskaaga waqti kasta, markaa waxaad leedahay fikrad ah nooca dadka iyo waxyaabaha webuyanycar ay wax ka qabtaan.
Webuyanycar waa shirkad ka shaqaysa baabuurta. Khibraddu had iyo jeer waxay kuu sheegtaa arrimo noocaan ah wax ka badan wax kasta oo laguu sheego, waxaana jira waxyaabo badan oo trailer ah oo waayo -aragnimo leh Webuyanycar.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa Webuyanycar, wuxuuna weydiinayaa su'aasha ah inay tahay shirkad sharci ah ama khiyaano baabuur iibisa.
Si aan u helno gunta arrin oo aan u dejinno khilaafka maankeenna, waxaan u baahannahay inaan fahanno sababta mararka qaarkood dadka qaar u dareemaan in laga faa'iidaysto.
Waxaa jira laba nooc oo iibiyeyaal ah: Iibiyeyaasha doonista leh iyo kuwa quusta iibiya. Qof kasta oo weydiisanaya xigasho Webuyanycar wuxuu noqon karaa iibiyaha doonista baabuurkiisa, iibiye quus ah, ama isku darka labadaba.
Iibiyeyaasha doonista leh ayaa baabuurtooda ku taxay suuqa waxayna diyaar u yihiin inay ku iibiyaan qiimo sax ah. Iyagu ma rabaan inay si weyn uga gorgortamaan qiimahooda mana raadinayaan dalabyo kubbadda hoose ah oo ka imanaya gorgorrada.
Qaar ka mid ah kuwa wax iibiya oo diyaar u ah ayaa tijaabinaya suuqa, iyagoo ka walwalsan waxa ay ka akhrinayaan warbaahinta, qiimaha gaarigooda iyo inay la yaaban yihiin inay ka baxaan iibsigii ay sameeyeen waqti ka hor iyagoo wata ugu yaraan xoogaa lacag ah.
Iibiyeyaasha quusta ah waxay u baahan yihiin inay wax iibiyaan. Waxaa laga yaabaa inay hore u soo iibsadeen baabuur kale oo badan waxayna dareemayaan inay u baahan yihiin inay iibiyaan kan gaarka ah.
Xaaladaha nololeed ee qofka ayaa ka dhigi kara mid quus ka ah waxyaabaha qaarkood, tanina mararka qaarkood waa caadi. Iibiyeyaasha quusta ah ayaa aad ugu habboon inay hoos u dhigaan qiimahooda weydiinta oo ay gorgortamaan.
Hadda, fahamkan ayaa ku kaxeeya qaar ka mid ah iibsadayaasha si ay u sameeyaan dalabyo aad u hooseeya oo naxdin leh.
Geedi socodku maaha mid xaq ah. Laakiin waxay noqon kartaa mid caddaalad ah, haddii aad adigu iska samirto oo aad naftaada u oggolaato waqti aad si habboon ugu qiimayso waxaad galayso.
Muxuu sameeyaa Webuyanycar?
In kasta oo aan kuu sheegi karo waxa aan u malaynayo in Webuyanycar sameeyo oo uu macaash ka helo, waxaa ugu wanaagsan in ay kuu soo saaraan bayaankooda oo aad ku akhrido erayadooda.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Mybitcointube.com 2022: Heli Seeraar Degdeg Ah Hadda Daawashada Fiidiyowga YouTube -ka
The Websaydh Webuyanycar waxay leedahay “Qalabkayaga qiimeynta baabuurka ee onlaynka ah wuxuu ku shaqeeyaa wax ka yar hal daqiiqo si uu u bixiyo qiimeyn degdeg ah oo lacag la’aan ah. Ku qor taargada lambarkaaga iyo faahfaahinta xaaladda gaarigaaga si aad maanta u hesho qiimeyn sax ah. ”
"Markay tahay waqtigii aad ugu dhaqaaqi lahayd baabuurkaaga xiga waxaa laga yaabaa inaad naftaada ku fikirto," Waa maxay qiimaha baabuurkaygu? " Intee in leeg ayaa qiimaha gaadhigaagu si weyn ugu xidhnaan doonaa qaabka gaadhiga, da'da iyo xaaladda.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u leedahay qiimeyn, ballan ka qabso laanta deegaankaaga oo waad iibin kartaa isla maalintaas. ”
“Webuyanycar.com, waxaan ku dadaaleynaa inaan bixino adeegga iibsiga baabuurka ee ugu dhaqsaha badan uguna dhibka badan.
Laga bilaabo marka aad isticmaasho aaladda qiimeynta baabuurka ee onlaynka ah illaa mid ka mid ah maareeyayaasha laanta saaxiibtinimada leh ay ka baaraandegto iibsiga gaarigaaga, nidaamkeenna waxaa loogu talagalay inuu ka dhigo ficilka iibsashada gaarigaaga mid deg deg ah, fudud oo aad u sahlan. ”
Muxuu Webuyanycar kaa rabaa?
Website -ka shirkaddu wuxuu leeyahay "Macaamiishayadu waxay inta badan noo sheegaan," Waxaan raadinayay qof si dhaqso ah oo fudud ku iibsan kara baabuurkayga walina waxaan doonayay inaan helo qiimo sax ah ".
Haddii taasi u eg tahay adiga, markaa waxaad timid meesha ugu fiican. Hadafkayagu waa inaan siino qiimo tartan baabuur kasta oo aan iibsanno.
Waxaan dammaanad qaadeynaa inaan ku siin doonno dalabka gaarigaaga iyadoon loo eegeyn midabkiisa, da'diisa, masaafadiisa, xaaladdiisa ama haddii kale (iyadoo la eegayo kormeerka, qiimuhu wuu is beddeli karaa).
Waxa kaliya ee aan ku weydiineyno waa inaad awoodo inaad gaariga u keento laanta webuyanycar.com ee xaafaddaada si aan kaaga iibsanno. ”
Fikradaha madaxa bannaan
Waxaa jira heshiisyo wanaagsan iyo heshiisyo xun oo adduunka laga yeelayo taasina waa xaqiiqo. Nin xikmad badan ayaa yiri "Lacagtu had iyo jeer way soo rogmataa. Waxaan ku doorannaa ficilladeena qaybta (madaxa ama dabada) aan jeclaan lahayn inaan kor u aragno."
Qofka caqliga lihi waa aniga jidka, hadalkuna waa sax. Webuyanycar kuguma qasbi doonto inaad iibiso gaarigaaga taasina sidoo kale waa xaqiiqo.
XIDHIIDHKA: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lacag Loogu Kaydsan Karo Miisaaniyad Adag Sannadkan
Arrimuhu way dhacaan waana inaad u diyaargarowdaa taas. Hadalkaas ka samee wax kasta oo aad jeceshahay.
Dib u eegista Webuyanycar
Tan darteed, waxaan sii deyn doonaa dhowr khibradood oo macaamiisheeda ah si aad adigu u qiimeyso waxa aad u malaynayso. Hagaag, halkan ayaan tagnaa;
#1 - Patrick Brown wuxuu leeyahay “Ma aha khiyaamo, waa ganacsi. Waxay kaa iibsan doonaan baabuur kasta, laakiin qiimo jaban intii ay awoodaan si ay macaash ugu helaan ama ha xaraashaan ama ha kala tagaan.
Haddii baabuurkaagu leeyahay qiime dib -u -iibin dhab ah, waxaa jira habab ka wanaagsan oo lagu iibiyo. Laakiin haddii ay duug tahay oo ficil ahaan aan qiimo lahayn oo aad rabto uun inaad ka takhalusto, waxaad ugu yaraan u heli kartaa wax.
Haddii aad gasho diiwaangelinta iyo masaafada mashiinkaaga mareegtooda, waxay ku siin doonaan xigasho. Laakiin xigashadaasi waxay khuseysaa oo kaliya haddii baabuurku uu ku jiro xaalad ficil -yar.
Shuruudahooda iyo shuruudahooda, oo aad ku raacsan tahay markaad weydiisato xigasho, waxay yiraahdaan xigashada ma ahan dalab aad ku iibsato.
Taasi waxay ku salaysan tahay dhowr mala -awaal, oo ay ka mid tahay in mishiinku bilowdo oo uu shaqaynayo, baabuurkuna uusan lahayn wax cilad ah, si kasta oo aan wax u dhimeyn, wuxuu leeyahay laba qaybood oo furayaal ah, iwm.
Kahor intaanay bixin dalab adag waxay baari doonaan baabuurka waxayna raadin doonaan marmarsiiyo si loo yareeyo dalabkooda.
Soo -jeedintoodii ugu dambaysay ficil ahaan had iyo jeer way ka hooseysaa, badanaana aad bay uga hooseysaa, marka loo eego xigashada websaydhka… ”
#2 - Carl Atkins wuxuu leeyahay “Ma aaminsani in“ Waxaan iibsanaa baabuur kasta ”waa khiyaamo. Halkan UK gudaheeda, waxay hadda dhammeeyeen warbaahin iyo olole uu horkacayo Phillip Schofield.
Waxaan horay uga haystay qiimayn onlayn ah dhowr baabuur oo iyaga ka mid ah, mar walbana waxaan u arkaa dalabyada inay yihiin kuwo liita.
Gaar ahaan marka farta yar ay sheegto in qiimaynta kama dambaysta ahi ay yaraan karto iyadoo ku xidhan xaaladda dhabta ah ee baabuurka marka aad geyso xafiiska deegaanka.
Marka laga eego dhinaca saadka, waxaan had iyo jeer ka fikirayay in aan baabuurkeygii hore ku iibiyo baabuur cusub, maadaama aan u baahnaan lahaa oo kaliya inaan u kaxeeyo hal meel, anigoo aan u baahnayn inaan qaado wiishashka ama gaadiidka dadweynaha.
XIDHIIDHKA: Blogyada Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee ugu Fiican: La cusbooneysiiyay 2022
#3 - Gary Cooke wuxuu leeyahay “Qorshahayga maaliyadda baabuurka ee PCP wuxuu soo galay sanadkii ugu dambeeyay xirmada maaliyadda. Waxaan haystay 9 bilood si aan u badbaadiyo £ 11,000 ama aan dib ugu celiyo baabuurka aniga oo aan waxba haysan.
Ganacsigu wuxuu ahaa mid aad u xun sida cadaabta mana aanan dooneynin inaan ku ganacsado qaab kale maadaama aanan ku kalsoonayn. Gaadhigu wuxuu lahaa qiimihii buuga ganacsiga oo ku dhawaad ​​£ 15,000 iibka gaarka loo leeyahayna wuxuu ahaa ku dhawaad ​​£ 18,000.
Baabuurkaygu wuxuu lahaa maaliyad aad u fiican si dadku aysan u doonayn inay halis ugu gataan inay si gaar ah u iibsadaan badanaana dadku ma la socdaan £ 18k si ay gaar ugu iibsadaan baabuur.
Xoogaa waan ku dhegay! Waxaan maqli jiray dhammaan noocyada kala duwan ee sheekooyinka naxdinta leh ee ku saabsan WBAC, inay ku siin doonaan qiimo ka dibna hoos u dhig markii aad halkaas joogtay oo ku dar dhammaan noocyada kala duwan ee khidmadaha laakiin ka dib fiiri wareeg oo i siiyay lacagtii ugu badnayd shirkad ganacsi baabuur waxayna diyaar u ahaayeen inay i siiyaan lacagta inkasta oo ay jirto maaliyad saaran gaadhiga.
Waxaan hoos u soo qaaday anigoo filaya inaan la dagaallamo koonahayga laakiin waxay istaageen £ 16,500 oo ay bixiyeen, waxay igu soo dallaceen khidmaddii maamulka oo ay aad ugu hormareen ka dibna waxay ii soo bandhigeen wiish.
Waxay dareentay inay waxoogaa yara fududahay, qiyaastii 5 maalmood ka dib waxaa jiray lacag caddaan ah oo ku jirtay koontadayda bangiga waxaanan bixiyay lacagtaydii la hagaajiyay ee la isku daray iyo lacagtii ugu dambaysay oo xitaa qaar baa iga hadhay si aan u saaro baabuurkayga xiga. ”
Ha ku mashquulin hadda. Tani looma jeedin inay ku caajiso. Haddii aad dhab ahaantii jeclaan lahayd inaad ogaato waxay dadku u malaynayaan markaa kani waa soo koobitaan kooban oo ah waxa dadku u malaynayaan.
Webuyanycar ma sharci baa mise waa khiyaano?
Webuyanycar waa shirkad xalaal ah oo iibsata baabuurta. In kasta oo laga yaabo inay leeyihiin arrimo cad oo ku saabsan sida ay u maamulaan tusaalaha ganacsi ee shirkadooda, haddana ma aha khiyaamo.
Bogga Quora ee Webuyanycar
Ma inaan iibsadaa baabuur cusub ama baabuur la isticmaalay?
Dib -u -eegista FreedomPop 2022: FreedomPop Runtii ma Xorbaa mise Waa Fadeexad Cusub?
Sida Loo Bilaabo Meherad Ka Dhacda Texas 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-Talaabo
Texas waa meesha labaad ee ugu wanaagsan ee laga sameeyo ganacsi sida ku cad liiska Forbes. Wax walba runtii way ka weyn yihiin Texas,…
Xilligan internet-ka iyo joogitaanka khadka tooska ah, dhageysiga raadiyaha ayaa ka soo wareegay habaynta analoogga ee…
Dib u eegista Caalamiga ah ee Maamulka Lacagta 2022| Sidee U Shaqeeya?
Maareynta Lacagta Caalamiga ah (MMI) waxay ka caawisay dad badan inay si fiican u fahmaan sida loola macaamilo dhaqaalahooda…